Track 1: Kaca — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ma ogtahay in aad u jeclaaday oo aad yaqaan?
oo dhan Waxaan fuuli dhinaca qaldan
Laakiin waxaan ku garaaceen our xabadka at nin qaldan
"Ma u baahan tahay Ilaah"
Ma laga yaabaa in ay ka odhan Afkooda our, laakiin waxaan samayn la nolosheena oo dhan
Taasi waa been geesi, uu ugu sarreeya ma dhow, waxaan wada dhintaan
John 5:28,29, xaakinka halkan waa!
Waan jeclahay this song iyo music oo dhan! Ahu uu idin siiyey hadiyad qarsoon ma waxa maalmood ee la soo dhaafay oo aad dadka oo keentay in mid ka mid ah kan nooleeya! Waa wax qurux badan maxaa yeelay wakhtiyo u qeybiso heli waalan, laakiin waxba naga joojin kara haddii aan kici.
Waxaad igu dhiiri in isku biimeynta ah oo dhan my! #116
eliassimbeye • December 10, 2014 at 8:54 waxaan ahay • Reply
kuwa ay yihiin awood am nin lyrics ka Zambia oo halkan songs waa adag tahay in la soo bixi inaad si adag u shaqeeyaan si ay lacag si download.so i adag tahay in la shaqeeyaan week.anyway ka dib markii i kaxaynayno album waxay ahayd u ​​qalantaa.
jecel this guys music!! Runtii doonayaa inaan isaga u hesho in aan Church ee Manassas Va. Maxaa a barako Eebe!
Aniga 14 iyo im weli ku tiirsan kii iyo wixii Ilaah waa,iyo haddii uu dhab ah ama ma. Waan ogahay ee qof kasta da'da aan hubin, laakiin dhab ahaantii waxaan doonayaa in aan noqdo qaarkood. song waxay igu caawisay in la ogaado in aanan u baahan tahay inaad la hubin dambe maxaa yeelay, isagu wuxuu sameeyey waxyaalo badan oo aniga iyo Ma u baahan tahay inaad shaki.
Oluwafemi • January 29, 2015 at 1:14 waxaan ahay • Reply
Trip marnay waa waxyi weyn ii. Sidee i jecel yihiin inay aad la kulantid qof maalin maalmaha. Dadka ridani Hir ii sheegin aynu eegno iyo dhaqmaan si isku mid ah. Waxaad tahay sida mid awood leh in gacmaha Ilaaha. Ilaahay ha barakeeyo aad walaalkaa!
I, kuwaas oo ku gabyeen jillaab?